विज्ञान र प्रविधि सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: विज्ञान र प्रविधि
एचएमडी ग्लोबलले इजिप्टमा नयाँ बजेट फोनको घोषणा गर्‍यो। सबै भन्दा नोकिया .8.2.२ को प्रक्षेपणको अनुमानित भए पनि वास्तविक घटना नोकिया २.2.3 लाई सुरु गर्ने उद्देश्यले थियो। यो एक प्रविष्टि-स्तर ग्याजेट हो ...
Huawei रूस मा 5G को प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो
Huawei विवादको केन्द्रमा रहेको चीन-अमेरिका व्यापार युद्धको वरिपरि प्रश्नहरू, कहिलेकाँही चाखलाग्दो प्रसंगहरू हुन्छन्। रसियाले निर्णय लिएको छ कि चिनियाँ G जी पूर्वाधारको मुख्य आपूर्तिकर्ता हुनेछ। रूस ...
स्मार्टफोन माइक्रोसफ्ट Lumia 435 XNUMX: समीक्षा, विशिष्टता र समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 08.10.2019
लुमिया 435 400 चाखलाग्दो बजेट मोडेल हो। ब्राण्डको धेरै जसो मोडेलहरू बाहेक अरू दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने यो device०० को लाइनअपमा पहिलो उपकरण हो। यदि तपाईंलाई बच्चाको लागि स्मार्टफोन चाहिन्छ भने, ब्याकअप वा ...
GP डायोड भनेको के हो र यसको उद्देश्य के हो?
धेरै जसो कम्प्युटर उपकरणहरूका प्रयोगकर्ताहरूले बिर्सछन् कि ध्वनिक उपकरणहरू, टेलिभिजनहरू र अन्य घरेलु उपकरणहरू जस्तो नभई यसले अत्यधिक तातो पार्छ र परिणाम स्वरूप, खराबी र ...
आरएस ट्रिगर अपरेशनको सिद्धान्त, कार्यात्मक रेखाचित्र, रूपान्तरण तालिका
प्रकाशित 15.09.2019 10.10.2019
ट्रिगर सरल उपकरण हो, जुन डिजिटल अटोमेटन हो। यसमा स्थिरताको दुई राज्यहरू छन्। यी राज्यहरू मध्ये एकलाई मान "१" तोकिएको छ, र अर्को - "०"। ट्रिगर राज्यका साथै बाइनरी मान ...
के मैले Xiaomi ट्याब्लेट किन्नु पर्छ? समीक्षा र सर्वश्रेष्ठ मोडेलको समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 14.12.2019
ट्याब्लेट कम्प्युटरहरूका लागि बजार, स्मार्टफोन जस्ता, गतिशील रूपमा परिवर्तन हुँदैछ। यदि हिजो मात्र एप्पल र सामसु .लाई उद्योगको निर्विवाद नेता भन्न सकिन्छ, आज अन्य निर्माताहरूले उनीहरूसँग समातिरहेका छन्। तिनीहरु मध्ये एउटा…
एक क्यानन कार्ट्रिज आफैंमा कसरी भर्ने
प्रकाशित 15.09.2019 11.10.2019
कागजमा डिजिटल आउटपुटको लागि ईंकजेट प्रिन्टरहरू सबैभन्दा सस्तो समाधानहरू हुन्। त्यस्ता प्रिन्टरहरूको सामूहिक उत्पादनमा केवल केही कम्पनीहरू संलग्न छन्। यी एप्सन, क्यानन र एचपी हुन्। अन्य ...
PS3 कति खर्च गर्छ? PS3 कन्सोल - मूल्य
सोनीको प्लेस्टेशन र प्लेस्टेशन २ को सफलता पछि, १21994 and र २००० मा रिलीज भयो, नयाँ मोडलको उपस्थिति केवल समयको कुरा मात्र देखिन्थ्यो। नयाँ खेलको बारेमा पहिलो अफवाहहरू ...
बर्गलर अलार्म: स्थापना र स्थापना
चोर अलार्म प्राविधिक उपकरणहरूको सेट हो जुन निजी सुविधामा अवैध प्रवेशको चेतावनी दिन्छ। उही समयमा, यसले एक डरलाग्दो ध्वनी निकाल्छ र सुरक्षा कन्सोलमा जानकारी प्रसारित गर्दछ। आधुनिक संसारमा ...
एउटा जाइरोस्कोप भनेको के हो?
एक दशक पहिले, एक इन्टरनेट जडान, इन्फ्रारेड पोर्ट, वा ब्लुटुथ टेक्नोलोजीको साथ एक टेलिफोन केही असामान्य कुरा थियो। अब यी सबै कार्यहरू परिचित भइसकेका छन्, र ती मध्ये केही ...
घर र उद्योगमा नानोटेक्नोलोजी
प्रकाशित 15.09.2019 12.10.2019
प्रत्येक दिन हामी न्यानो टेक्नोलोजीले ल्याउने अपरिहार्य क्रान्तिमा पुग्न सक्छौं। हामी नयाँ उपकरणहरू सिर्जना गर्दछौं, हामी अनौंठो सामग्रीहरू पाउँछौं जुन हामीले सोचेका छैनौं। दैनिक जीवनमा न्यानो टेक्नोलोजीको प्रयोगलाई अनुमति दिइयो ...
लेनोभो B590 नोटबुक: विशिष्टता, समीक्षा र समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 07.10.2019
B590 श्रृंखला राम्रो बजेट ल्यापटप को कोटी को श्रेय दिन सकिन्छ, जब तपाईं buyingण वा intoण मा जाने छैन जो खरीद को जब। तर पनि अपेक्षाकृत कम मूल्य (१ 15-२० हजार रूबल) को बावजुद, ल्यापटप ...
सामसु W वेभ 525२525: विशिष्टता, सेटिंग्स, समीक्षा। कसरी फ्ल्यास गर्ने? सामसु W वेभ XNUMX२XNUMX टर्न छैन: कसरी रिफ्लेश गर्ने?
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि शेरको ध्यानको हिस्सा शीर्ष-अन्तका स्मार्टफोनहरूमा भुक्तान गरिएको छ, जसले उनीहरूको अत्यधिक कार्यक्षमता र कम कम एक्जोरबेट मूल्यको साथ सबैलाई चकित पार्दछ। यद्यपि सबै बाधाअनुरुप, बिक्री प्रायः ...
भ्याकुम क्लीनर सक्सन शक्ति। उपकरणहरू
"धुलो कहाँबाट आउँछ?" - प्रश्न अनन्त र बयानात्मक छ। कसैलाई यसको उत्तर थाहा छैन, तर तपाईंले प्राय: जसो शहर अपार्टमेन्टमा हरेक दिन यो स fight्घर्षको बिरूद्ध लड्नु पर्ने हुन्छ।
उत्तम दही निर्माताहरू: मूल्या rating्कन, लोकप्रिय मोडेलहरू, छनौट
उचित पोषणको साथ एक स्वस्थ जीवनशैली आज चलनमा छ। जो कोही आफ्नो उपस्थिति र कल्याण अनुगमन गर्दछ कि किण्वित दुध उत्पादनहरु को शरीर को कामका लागि को भूमिका खेल्छन्। TO…
धुने मेसिनको खराबी। वाशिंग मेशीनको सम्भावित खराबी
लुगा धुने मेसिनको टुक्रिने बानी छ। अक्सर मालिकलाई थाहा छैन कि ब्रेकडाउनको कारण के हो, र चाँडै मास्टरलाई कल गर्न फोन लिन्छ। सिद्धान्त मा, सबै सही छ। तर समस्या यो हो ...
प्रैंकरहरू सधैं हास्यास्पद हुँदैनन्। प्राran्केतकहरू को हुन् र किन शरारत पीडितहरू प्रायः तिनीहरूको हास्य बुझ्न असफल हुन्छन्?
आधुनिक संसारमा, टेलिफोन, मोबाइल वा ल्याण्डलाइन लामो समयदेखि परिवार र साथीहरूसँग सञ्चारको माध्यम हुन छोडेको छ। यो सक्रिय रूपमा ग्राहकहरु को सक्रिय अभियान को लागी बैंकहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ, पोलहरु नियमित रुपमा आयोजित गरीन्छ। बाहेक ...
प्रेस्टिगियो मल्टिप्याड:: ट्याब्लेट विवरण र समीक्षा
त्यसो भए, आज प्रिस्टिगियो मल्टिपैड called नामको ट्याब्लेट हाम्रो ध्यानमा प्रस्तुत गरिनेछ। पोइन्टमा यो उपकरण लामो समयदेखि खरीददारहरूलाई खुशी पार्दै छ। तर वास्तवमा के? "प्रेस्टिगियो" जारी गरिएको छ ...
ईम्प्रूविजित माध्यमबाट घरमा मेटल डिटेक्टर कसरी बनाउने?
भटकने गन्ध, साहसिक गन्ध, वा विभिन्न धातु मलबेबाट तपाइँको गर्मी कुटीरको प्रोसेसिक निपटानले एउटा विशेष यन्त्र खरीद गर्न सुझाव दिन सक्छ। प्रोफेशनल मेटल डिटेक्टरहरू, जसको समिक्षा सबैलाई थाहा छ, मूल्यवान छन् ...
स्मार्टफोन एक्सप्ले रियो ("एक्सप्ले रियो") - मालिकहरूको मूल्य, मूल्य, फोटो र मोडेलको विशेषताहरू
आज, बजेट स्मार्टफोनले धेरै सक्रियताका साथ लोकप्रियता प्राप्त गर्न सुरु गरिरहेको छ। र यो बुझन योग्य छ, किनकि दृश्यमा तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा फ्ल्यागशिपभन्दा फरक हुँदैनन् र एकै समयमा धेरै सस्तो हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले, तपाईंलाई आवश्यक मूल्यको खातिर ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 222 अर्को पाना
65 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,052 प्रश्नहरू।